OTU ESI EME KA MMA FOTO DI NA PHOTOSHOP - PHOTOSHOP - 2019
Otu esi eme ka mma foto di na Photoshop
Foto ndị na-adịghị mma na-abịa n'ụdị dị iche iche. Nke a nwere ike ịbụ ọkụ ọkụ na-ezighi ezi (ma ọ bụ ntụgharị ihu), ọnụnọ nke ụda na-achọghị na foto ahụ, yana ịmegharị ihe dị mkpa, dịka ihu na eserese.
Na ihe omumu a anyi ga aghota otua esi meziwanye onu foto di na Photoshop CS6.
Anyị na-arụ ọrụ na otu foto, nke e nwere ụda, na onyinyo na-enweghị isi. Ọzọkwa usoro nhazi ga - apụta ìhè, nke a ga - ewepụ. Full set ...
Nke mbụ, ịkwesịrị iwepu ọdịda na ndò, dị ka o kwere mee. Tinye nhazi ọkwa abụọ - "Ntugharị" ma "Ọkwa"site na ịpị akara ngosi gburugburu na ala nke palette.
Mbụ tinye "Ntugharị". Njirimara nke nhazi ukpụhọde ga-emeghe.
Anyị "wepụ" ebe ndị gbara ọchịchịrị, na-ehichapụ ụkwụ ahụ, dịka e gosipụtara na nseta ihuenyo, na-ezere nkwụsịtụ maka ìhè na ọnwụ nke obere nkọwa.
Dezie "Ọkwa". Na-agagharị n'aka nri nke ihe mmịfe ahụ egosipụtara na nseta ihuenyo, mee ka onyinyo dị ntakịrị.
Ugbu a ịkwesịrị iwepụ mkpọtụ na foto na Photoshop.
Mepụta otu nnyekọrịta nke jikọtara (CTRL + ALT SHIFT + E), wee deziekwa ihe ọzọ a, dọrọ ya gaa na akara ngosi ahụ e gosipụtara na nseta ihuenyo ahụ.
Tinye nchịkọta na top top nke oyi akwa. "Blur n'elu".
Ndị nkedo na-agbalị ibudata arịa na mkpọtụ, ka ha na-anwa idebe obere nkọwa.
Mgbe ahụ anyị na-ahọrọ nwa dị ka isi agba site na ịpị akara ngosi nhọrọ ụcha na ngwaọrụ ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị, anyị na-amanye Alt ma pịa bọtịnụ ahụ "Tinye ihe mkpuchi akwa".
A ga-eji ihe nkpuchi juputara na nwa ya na akwa anyi.
Ugbu a họrọ ngwá ọrụ Azu na ihe ndị na-esonụ: agba - ọcha, ike - 0%, opacity na nsogbu - 40%.
Na-esote, họrọ ihe mkpuchi ojii site na ịpị bọtịnụ aka ekpe, ma na-ehichapụ ụda nke foto ahụ na ahịhịa.
Ihe na-esote bụ mkpochapụ nke aberrations agba. N'ọnọdụ anyị, ọkụ ọkụ a.
Tinye nhazi ukpụhọde "Mmiri / Saturation", họrọ na listi ndepụta Green ma belata saturation ka efu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, omume anyị mere ka mbelata dị nkọ nke onyinyo ahụ. Anyị kwesịrị ime ka foto ahụ doo anya na Photoshop.
Iji mee ka nkọcha, mepụta otu nnyekọ nke ejiri, jaa menu "Nyocha" ma tinye "Eji nkọcha". Ihe nkedo iji nweta mmetụta a chọrọ.
Ugbu a, anyị ga-atụle ihe dị iche iche n'àgwà onye uwe ahụ, dịka ụfọdụ nkọwa gosipụtara n'oge nhazi.
Jiri uru "Ọkwa". Anyị na-agbakwunye oyi akwa a (lee n'elu) ma nweta mmetụta kachasị elu na uwe (anyị anaghị ege ndị ọzọ ntị). Ọ dị mkpa ime ebe gbara ọchịchịrị obere ntakịrị, na ìhè - ọkụ ọkụ.
Ọzọ, jupụta nkpuchi ahụ "Ọkwa" nwa ojii. Iji mee nke a, dozie agba agba ka nwa (lee n'elu), họrọ ihe nkpuchi na pịa ALT + DEL.
Mgbe ahụ, na-acha ọcha ọcha na parameters, dị ka a na-acha, anyị na-agafe uwe.
Nzọụkwụ ikpeazụ - na-eme ka ike gwụsịa. A ghaghị ime nke a, ebe ọ bụ na ihe niile dị iche iche na-eme ka ụcha gbanwee.
Tinye ukpụhọde mgbanwe ọzọ "Mmiri / Saturation" na ihe nchịkọta kwekọrọ ekwekọ anyị wepụ obere agba.
Site n'iji usoro aghụghọ ole na ole mee ka anyị nwekwuo ihu igwe.